Warka - Hindisaha iftiinka
Nidaamka sawir qaadista, oo ay ku jiraan xabagta UV, dahaadhka UV, khad UV, iwm, isbeddelada kiimikada waxay dhacaan ka dib markay helaan ama ay nuugaan tamarta dibedda, waxayna ku baaba'aan xagjirnimo bilaash ah ama cations, sidaasna ku kiciyaan falcelinta polymerization.
Sawirqaadeyaasha waa walxo soo saari kara xagjirnimo bilaash ah isla markaana sii bilaabi kara polymerization by iftiiminta.Ka dib markay monomers-yada qaarkood iftiimiyaan, waxay nuugaan fotonanka waxayna sameystaan ​​xaalad kacsan M *: M + HV → M *;
Ka dib isku-xirnaanta 'molecule' ee firfircoon, M *, R · + R '· xagjirnimada bilaashka ah ayaa la soo saaraa, ka dibna polymerization monomer ayaa la bilaabayaa si loo sameeyo polymer.
Tikniyoolajiyadda lagu daaweynayo shucaaca waa tiknoolajiyad cusub oo keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka ah, taas oo ay ku shubaan iftiinka ultraviolet (UV), elektronikada (EB), iftiinka infrared, laydhka muuqda, laser, kiimikada kiimikada, iwm, oo si buuxda u buuxiya "5E" astaamaha: Wax ku ool ah, Kartiyeyn, Dhaqaale, Keydinta Tamarta, iyo Bay'adda oo Saaxiib ah Sidaa darteed, waxaa loo yaqaan "Teknolojiyada Cagaaran".
Sawirqaade waa mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee koollada sawir-qaadaha ah, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara heerka daaweynta.
Marka sawir-qaadaha lagu shubo iftiinka 'ultraviolet light', wuxuu nuugaa tamarta iftiinka wuxuuna u kala baxaa laba xagjir firfircoon oo lacag la'aan ah, oo bilaaba silsiladda polymerization ee cusbada sawir qaadka ah iyo milixda firfircoon, samaynta xabagta iskutallaabta isku-xirnaanta iyo adkeynta. Sawir qaadaha wuxuu leeyahay astaamaha soonka, ilaalinta deegaanka iyo keydinta tamarta.
Molekuyuleellada curiyaha ayaa nuuri kara iftiinka gobolka ultraviolet (250 ~ 400 nm) ama gobol muuqda (400 ~ 800 nm). Ka dib markii uu si toos ah ama si aan toos ahayn u dhuuqo tamarta iftiinka ah, curiyaha curiyaha ayaa u kala wareegaya dhulka dhulka una wareegaya gobolka kelidii ee xiisaha badan, ka dibna u wareejinaya gobolka saddex-geesoodka ah ee xamaasadda leh iyada oo loo marayo kala-guurka nidaamka.
Ka dib marka kali ama seddexleeyda xaaladdu ku faraxsan tahay iyada oo loo marayo fal-celinta kiimikada monomolecular ama bimolecular, jajabyada firfircoon ee bilaabi kara monomer polymerization waxay noqon karaan xagjirnimo lacag la'aan ah, baqshiish, anions, iwm.
Marka loo eego farsamooyinka bilowga kala duwan, sawir qaadayaasha waxaa loo qaybin karaa sawir qaade xagjir ah oo xagjir ah oo lacag la’aan ah iyo sawir qaade xigasho ah, oo ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee la isticmaalo.